Niofana nandritra ny 10 volana ny andiany Mpitarika mendrika - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Katesista ao Moramanga
Niofana nandritra ny 10 volana ny andiany Mpitarika mendrika
Hary C. il y a 13 jours
Iarahana mahalala fa tsy ampy ny isan’ireo pretra manerana an’i Madagasikara. Isan’ny manome aina ny paroasy tsirairay ny fisian’ny katesista. Nisy ireo katesista vao avy niofana nandritra ny 10 volana.
“Ao anatin’ny Soratra Masina no ahitana ireo torolalana sy vahaolana amin'ny fiainana” hoy i Mgr Antoine Scopelitti tamin'ireo katesista andiany "mpitarika mendrika". Niofana nandritra ny 10 volana izy ireo. Tao amin'ny ivon-toeram-piofanana Mb Terezy Andranokobaka no nanaovana ny fiofanana ary tao ihany koa no namaranana izany fotoam-piofanana sy nanaovana ny lanonana fanirahana ny 29 aogositra 2019.
Mandalo fiofanana toa izao avokoa ny tsirairay izay voatendry hanao ity asa ity. Ireo rehetra efa naharitra kosa dia manao ny fanamafisana traikefa isan-taona. Nandritra ny fanirahana ireto andiany no nanaovana veloma ny pretra tompon'andraikitry ny ivon-toeram-panofanana. Noraisina teo avy hatrany koa ny pretra mandimby asa. Nahazo tombony manokana ireto mpiofana tamin'ity taom-piofanana 2019 ity satria saika ireo mpampiofana maro sy ny traikefa teo amin' ny fifandraisana dia nisitraka izany na ny lahy na ny vavy. Hanao ny fanjohiana sy fanarahamaso ireo mpiofana kosa no anisan'ny asa miandry ireo mpampiofana.